The Macbook Pro na Touch Bar dị na November 17 na ụlọ ahịa ndị ọzọ | Esi m mac
The Macbook Pro na Touch Bar dị site na November 17 na ụlọ ahịa ndị ọzọ
Ọnye na -bụ Javier Porcar? | | MacBook Pro, Asịrị, ọtụtụ
Ihe ọhụrụ Macbook Pro na Touch Bar na-abụ ihe ịga nke ọma n'ahịa dị ka usoro mgbasa ozi dị iche iche si chọọ. Ruo ugbu a, anyị maara ụbọchị ruru nke akụrụngwa, nke dịka Apple n'onwe ya si dị izu 4 ruo 5 site na isi okwu na njedebe nke Ọktọba. Site na echiche azụmaahịa, ọ bụ atụmatụ dị mma maka ụlọ ọrụ inwe ngwa ọrụ na ụlọ ahịa ozugbo oge ekeresimesi bidoro.
Taa, anyị amụtala site na ebe ịzụta ihe na Ihe ọhụrụ MacBook Pro na Touch Bar, ga-adị site na November 17 na ụlọ ahịa ndị ọzọ, nke ahụ bụ, ma ntanetị na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-abụghị Apple.
O yiri ka nzaghachi ndị na-eri ihe na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndapụ emeela ka Apple gbanwee atụmatụ ya, nke chọrọ inwe akụrụngwa dị n'okporo ámá na mgbede nke Black Friday. N'ezie, nyocha ngwaahịa na ngalaba ụlọ ahịa ndị a na-enye anyị ohere ịhụ ọnụọgụ akụrụngwa maka ụbọchị ndị a.
Ka o sina dị, ọ bụrụ na ịchọrọ omenala Macbook Pro, ịnwere ike ịchọta ya n'ụlọ ahịa Apple, ebe ị ga - enweta nhazi niile enwere ike ịme ọhụụ ndị otu ọhụụ a.
Ọ na-esiwanye ike na Apple ga-ebipụ oge nnyefe nke ọhụrụ Macbook Pro, nke izizi edobere na 4 ruo izu 5, n'ihi na dịka anyị nwere ike ịgụ ụbọchị gara aga, kaadị akwụmụgwọ na-amalite ịgba ụgwọ, nke ga - egosi na ìgwè ndị ahụ na - aga.
N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụrụ na ịhọrọ Macbook 13 nke anụ ọhịa na-enweghị Touch Bar, gwa anyị na ọ dị na ngwaahịa ma dị maka mbufe.
Ya mere, ọ bụ naanị ụbọchị ole na ole iji hụ ngwa ọrụ ọhụụ n'onwe anyị. Site na m si Mac anyị ga-agwa gị ihe echiche mbụ bụ yana akụkụ nke anyị gosipụtara karịa ma ọ bụ nwere ike iju anyị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » The Macbook Pro na Touch Bar dị site na November 17 na ụlọ ahịa ndị ọzọ
MacOS Sierra 10.12.2 beta beta dị ugbu a
Apple enweghị ike ịkwụ ụgwọ nde 13.000 ahụ n'ihi na Ireland na-aga ịrịọ ya